विकास निर्माणका काम देखेर प्रेसर बढेको हो भने अझै बढ्नेछ : सांसद बाँस्कोटा - Himali Patrika
विकास निर्माणका काम देखेर प्रेसर बढेको हो भने अझै बढ्नेछ : सांसद बाँस्कोटा
हिमाली पत्रिका २३ चैत्र २०७७, 2:20 pm
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विकास निर्माणका काम केहीको प्रेसर बढेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद् बाँस्कोटाले विकास निर्माणका कामहरू देखेर कसैको प्रेसर बढेको भए त्यो अझै बढ्ने बताएका हुन् ।
उनले भने,’जनतचाले विकास चाहेका हुन् । आरोपमा मात्रै समय बर्बाद नगरौं । मेलम्चीको पानी आएको जनताले टुटी खोलेर पिउन थालिसके । विकास निर्माणका योजनाहरू देखेर काम अगाडि बढेको देखेर प्रेसर बढेको छ भने यो प्रेसर अझै बढ्नेवाला छ । ‘
उनले सरकार कामचलाउ नभएको पनि बताए । ‘सरकार कामचलाउ के भन्या ? कसरी हुन्छ कामचलाउ ? अहिले गठन भएको जगभित्र के छ ?,’ बाँस्कोटाले भने,’समर्थन आफू गर्ने फिर्ता लिन नसक्ने ! अर्को सरकार बनाउनका निम्ति एकदलीय दुई दलीय तीन दलीय बनाउने भन्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि कसरी काम चलाउ भयो ? ‘
सरकार कामचलाउ हुनलाई माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत झिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिनुस् त्यसपछि अर्को विषयको सुरुवात हुन्छ । आफैं अड्काउने आफैं पड्काउने के गर्ने हो आफैं गर्नुस् । राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान सबै खुला छन् । ‘
‘जनताका बीचमा जानु प्रतिगमन हुन्छ भने अग्रगमन के हुन्छ ?,’ उनले भने,’द्वन्द्वकालमा शाही शासनकालसँग छलफल गरेको अग्रगमन हो ?’
मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने अवस्थामा ताजा जनादेशको विकल्प नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरेर संसद् विघटन गरेको पनि सांसद बाँस्कोटाको दाबी थियो ।